Na-ezu ohi azụ azụ n'aka ndị Phishers | Martech Zone
Na-ezu ohi azụ azụ n'aka ndị Phishers
Wenezdee, Machị 21, 2007 Sunday, Jenụwarị 21, 2018 Douglas Karr
You nwetụla mgbe ị gara azu ebe ị na-idobe gị akara na a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị gị nri idide na-arahụ? N'ikpeazụ, ị buliri akara gị gaa ebe ọzọ, ọ bụghị ya?
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị tinye nke a na Phishing? Ikekwe onye obula nke na-anata phishing email kwesiri ịpinye aka na njikọ ahụ wee banye ozi ọjọọ na nbanye ma ọ bụ Kaadị E Si Nweta. Ikekwe, anyị kwesịrị ijide ndị sava ha nnukwu okporo ụzọ ha hapụrụ!
Nke a ọ gaghị abụ ihe nchebe karịa karịa ịnwa ịchọpụta saịtị Phishing ma gbochie ndị mmadụ na ha?
Dabere na Wikipedia: Na Mgbakọ, phishing bụ mpụ site na iji usoro mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.  Ndị na-egwu phishis na-anwa iji aghụghọ nweta ozi nzuzo dị ka aha njirimara, okwuntughe na nkọwa kaadị kredit, site na ime ka ha bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na nkwukọrịta elektrọnik. Ebay na Paypal bụ ụlọ ọrụ abụọ ezubere iche, ụlọ akụ ndị dị n'ịntanetị bụkwa ndị nkịtị. A na-ejikarị ozi email ma ọ bụ ozi ozigbo eme ntughari,  ma na-edugakarị ndị ọrụ gaa na weebụsaịtị, ọ bụ ezie na ejirila kọntaktị ekwentị. Ngbalị iji emeso ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke akụkọ phishing gụnyere iwu, ọzụzụ ndị ọrụ, na usoro teknụzụ.
Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na nke a ga-arụ ọrụ. Nzaghachi?
Nke a bụ email phishing m na-enweta kwa ụbọchị na email m:
Achọrọ m n'ezie na m nwere ike imebi ụmụ okorobịa a. Site n'ụzọ, Firefox na-arụ ezigbo ọrụ ịchọta saịtị ndị a:
Ọ bụ ezie na ịnweghị ike igbochi onye ọ bụla ịpịsị ụlọ ọrụ gị na ozi ịntanetị, ị nwere ike ịgba mbọ hụ na ndị ISP na-akwado nnyefe gị tupu ha ekwe ka ha banye na igbe ozi enweghị ike ịchọpụta ebe ha si. Emezuru nke a na mmejuputa iwu nke Nyocha email frameworks dị ka SPF na DMARC.
Tags: DMARCNyocha emailphishingspfihe ndekọ spf